आज काँग्रेसको पालिकास्तिरीय चुनाव हुँदै, को को छन् अगाडी ? - Baikalpikkhabar
आज काँग्रेसको पालिकास्तिरीय चुनाव हुँदै, को को छन् अगाडी ?
दमक/ आज नेपाली काँग्रेसको पालिकास्तिरीय चुनव हुँदैछ । चुनावमा क्षेत्रीय प्रतिनीधि र वडा सभापतिहरुले मतदान गर्दैछन् । जसकालागि नेपाली काँग्रेस दमकमा सभापति पदमा तीन जनको उम्मेदवारी परेको छ । सभापतिमा प्रकाश प्रसाई, पर्शुराज रिजाल र रोशन विष्टको उम्मेदवारी परेको छ भने अन्य पदाधिकारीहरुमा पनि प्यानलनै उम्मेदवारी परेको छ ।
दमक ५ स्थित दिपिनी आधारभूत बिद्यालयमा बिहान १० बजेदेखि शुरु भएको उम्मेदवारी मनोनयमा चुनावी दौडमा रहेका तीनै समूहले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा उम्मेदवारहरु, नेता, कार्यकर्ताहरुको भिडभाड देखिएको थियो । करिब १ बजे प्रसाइँ उम्मेदवारी दर्ताका लागि पुगेका थिए भने त्यसलगत्तै विष्ट नेतृत्वको समूह र आधा घण्टापछि रिजाल नेतृत्वको समूह उम्मेदवारी दर्ताका लागि मतदान केन्द्रमा पुगेका थिए । निर्वाचनस्थलमा संघीय सांसद समेत रहेकी नेतृ महेन्द्रकुमारी लिम्बू पनि पुगेकी थिइन । सांसद लिम्बूले सञ्चारकर्मीहरुसंगको कुराकानीमा कांग्रेसको यो महाधिवेशनले आम कार्यकर्ताहरुको भावनालाई सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन ।
निर्वाचन समितिका अनुसार प्रसाई नेतृत्वको समूहले उपसभापतिद्धयमा युवराज (सागर) खनाल र मीना कोइराला , सचिवद्धयमा नवराज ढकाल, दिनेश अग्रवाल, सहसचिवमा नवराज न्यौपाने र मणि लिम्बूलाई उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ । रिजालको समूहबाट उपसभापतिद्धयमा प्रेम भट्टराई, संगम राई, सचिवमा रामचन्द्र अधिकारी, चन्द्रकुमार गिरी (कुमार), सहसचिवमा विजय राई र रमुना चापागाई र विष्ट समूहबाट सचिवमा दिपेश दाहालको उम्मेदवारी परेको छ ।
पदाधिकारीहरुसंगै वडाबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरुमा निर्विरोध भएपनि समावेशी कोटामार्फत निर्वाचित हुने सदस्यहरुमा समेत चाहिने भन्दा बढी उम्मेदवारी परेको मतदान अधिकृत ब्रवुराम दाहालले जनाएका छन् । दमकमा ३ सय २७ जना मतदाता छन् ।
यसैगरी नेपाली कांग्रेस कमल गाउँपालिकाको सभापतिमा तीन जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन कार्यक्रम अन्तर्गत कमलमा शनिवार भएको उम्मेदवार मनोनयनमा सभापतिमा तीन जनाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
एक जना सभापतिका लागि खगेन भण्डारी, बुद्धिराज न्यौपाने र प्रमोद दाहालको उम्मेद्वारी परेको छ भने दुई जना उपसभापतिमा लोकनाथ खनाल, चन्द्रलाल गौतम, पदम बहादुर निरौला, विक्रमसिंह कार्की र केदार कटुवालले उमेद्वारी परेको मतदान अधिकृत कुमार खतिवडाले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी दुई जना सचिवका लागि देवी प्रसाद दाहाल, तिलोचन आचार्य, महेन्द्र बुढाथोकी र सहसचिवमा दुर्गा प्रसाद पोख्रेल, सबिता दाहाल ( कटुवाल) ,ख्यामराज खनाल र टंकप्रसाद कट्टेलले उमेद्वारीको परेको छ ।
कार्यसमिती सदस्यमा भने वडाबाट २१ जना र १५ जना समावेशी कोटामार्फत तथा दुुई जना प्रदेश महाधिबेशन प्रतिनिधिमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएको मतदान सहायक अधिकृत विष्णु सुब्बाले जानकारी दिए । १ सय ३७ जना मतदाता रहेको कमलमा भोलि आइतवार विहान मतदान हुने सुब्बाले बताए ।
यसैगरी नेपाली कांग्रेस गौरादहको नगर अधिबेशनमा सदस्य पद बाहेक अन्य पदमा निर्वाचन हुने भएको छ । प्रत्येक वडाबाट ५ जनाका दरले ४५ जना सदस्य छनौट हुनेमा आवश्यक पद र उमेदवारको संख्या बराबर भएकाले सदस्य पदमा सर्वसम्मत चयन भएको निर्वाचन अधिकृत मोहनकुमार अधिकारीले जानकारी दिए । त्यसैगरी प्रदेश सभा क्षेत्रीय प्रतिनिधिको अपाङ्गता भएकाको सिटमा इन्द्रमणी दाहाल र पूर्णिमा राजवंशी सर्वसम्मत चयन भएको निर्वाचन अधिकृत अधिकारीले बताए । नगरको सभापति, उपसभापति, सचिब र सहसचिब पदमा निर्वाचन हुने भएको हो । सभापति पदमा एक जनाको लागि २ जनाको, उपसभापति पदमा २ जनाको लागि ४ जनाको उमेदवारी परेकोमा कोमल प्रसाद ढुङ्गानाले उमेदवारी फिर्ता लिएपछि ३ जना चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन । सचिब पदमा २ जनाको लागि ४ जनाको र सहसचिब पदमा २ जनाको लागि ३ जनको उमेदवारी परेपछि उमेदवार छनौटका लागि निर्वाचन हुने निर्वाचन अधिकृत अधिकारीले जानकारी गराए ।
आइतबार, १० असोज, २०७८, बिहानको ०८:२५ बजे